टाउको दुख्ने समस्या बाट यसरि छुट्कारा पाउनुहोस्…. ~ FMS News Info
टाउको दुख्ने समस्या बाट यसरि छुट्कारा पाउनुहोस्….
के तपाइको टाउको दुखि राख्ने समस्या छ ? यहि समस्या ले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ ? चिन्ता नगर्नुहोस, प्राय हाम्रो मुख्य समस्यानै टाउको दुख्ने हो । हामि यसबाट बाट दिनप्रतिदिन पीडित बनिरहेका छौ । कसैसंग रिस उठ्यो भने हाम्रो टाउको तातेर आउछ । कुनै समस्याले पिरोलिरहेको छ भने हामी भन्छौ एसले त मेरो टाउको नै दुखायो। टाउको दुख्ने समस्या हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर यो त विश्वभर नै छ ।‘टाउको दुखाइ’लाई व्यावहारिक समस्या र औडाहाको उखानको रुपमा समेत लिइन्छ । टाउको दुखेपछि कुनै काम गर्न मन नलाग्ने, वास्तविक अर्थमा काम गर्न अत्यन्त गाह्रो हुने बाधक पीडाका रूपमा लिइन्छ । धेरै मानिस टाउको दुखेको बुझ्छन् तर त्यसको कारण वा रहस्य जान्न सक्दैनन् । जथाभावी औषधि खाने गर्छन्, तर यो उचित उपचार होइन । टाउको दुख्नु आफैंमा रोग नभयर शारीरिक समस्या वा रोगको कारण हुन्छ ।
टाउको दुखाइबाट बच्ने केहि उपायहरु :
* निश्चित समयमा सुत्ने गर्नुहोस :
अनिदो रहने, जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला सुत्ने, उठ्ने गर्नाले पनि धेरैलाई टाउको दुखिरहेको हुन्छ वा अरु कारण (जस्तै माइग्रेनको टाउको दुखाइ) बढाइरहेको हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म निन्द्रा नफालौ, सधैं एकै समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी गरौ ।
* नियमित रुपमा व्यायाम गर्नुहोस् :
नियमित रुपमा व्यायाम गर्नाले शरीर स्फुर्त रहनाका साथै मन पनि चङ्गा रहन्छ। यस्ले शरीरमा इन्डोर्फिन नामक मस्तिस्कको प्राकृतिक पेनकिलर पनि उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ । हफ्ताको ४–५ दिन करीब २०–३० मिनेट छिटो–छिटो हिंड्नु स्वास्थ्यकर हुन्छ ।
*मानसिक तनाव कम राख्ने
*चियाकफी, जाडरक्सी, चुरोट कम गर्ने
*चिसोले टाउको सेक्ने
चिसोले सेक्नाले पनि दुखाइमा केही आराम गर्छ, त्यसैले चिसो पानीमा रुमाल भिजाएर टाउकोमा राख्नाले टाउको दुखाइमा आराम मिल्छ।
(जनचेतनाका लागि शेयर गरिएको)